Hery - Tsiky dia ampy | Izaho sy ny ahy | 28
2007-07-30 @ 08:15 in Izaho sy ny ahy
Manomboka miditra miasa indray androany... mitsikitsiky daholo ny olona nifanena tamiko eran'ny couloirs sy tato amin'ny etage niasako sady niteny hoe "Ben' tornato" sy "Buona ripresa". Dia mody mitsiky koa aho mamaly azy... tsy fantany anefa fa ny ato antsaiko mbola grasse matinée sy film sy mandehandeha. Omaly mantsy mbola vao nandehandeha tany Tivoli aho (Jereo etsy ambany ny Video)... ary halina mbola vao nijery an'ilay Black Dawn an'i Steven Seagal tamin'ny télé. Nony tonga tato amin'ny birao dia saika tsy tadidiko hoe iza amin'ireto lakilé be dia be ireto moa no mamoha ity birao ity. Rehefa nesorina ny lakilé rehetra ilaina any an-trano vao azoko antsaina ilay izy. Dia tahaka ireny tsy tato ela be ireny aho. Milamina be ilay birao (tsy tato marina aho). Misy affichage napetaka teo amin'ny écran-n'ny ordinateur milaza ny consigne nandritra ny mise à jour natao tamin'ny logiciel ampiasaiko... etsy ambonin'ny birao anakiray dia misy ny documents misavovona izay tokony nataoko ka tsy nisy nanao. Io izany ilay "ripresa". Dia buona ripresa tokoa!!! (tohiny)
2007-07-23 @ 09:17 in Izaho sy ny ahy
Herinandro farany amin'ny congé ity dia manao sprint farany amin'ny asa madinidinika isankarazany. Amin'ny weekend hilomano be mihitsy. Omaly izahay efa tany Bracciano nilomano kely.
Ohatry ny hoe mitovitovy ny anaran'ilay tanana anakiroa soratako amin'ity blaogiko ity. Ny nosoratako farany dia Anzio izay nandehananay tamin'ny Alahady. Izao indray dia Angers izay nisy ahy efa ho andro vitsivitsy izao. Adino any Roma ny cable USB dia tsy tafiditra eto ny sary fa any indray mifampitady. Tokony mbola tsy manoratra eto koa aho izao fa izany no tena hoe tsisy tany han... (tohiny)
2007-07-09 @ 00:05 in Izaho sy ny ahy
Sary vitsivitsy fotsiny nandritra ny nandehananay tany Anzio androany. Anzio dia tanana eo amin'ny 67 km miala an'i Roma. Amoron-dranomasina. Ny plage eo an-tanàna dia andoavam-bola daholo. Ny parking koa toa izany. Tanàna kely fa be olona. Tsy dia misy touristes... ary tsy nisy vahiny hitanay mihitsy teny an-dalana. Tsy nisy afrikana mpivarotra poketra sy solomaso na fehikibo sandoka. Izay nahita anay teny andalana dia nijerijery... angamba gaga hoe olona avy aiza koa itony. Nanaraka ny lalana mankany Latina izahay tamin'ny nandroso dia nivily teo Aprilia. Rehefa niverina kosa nanaraka ny moron-dranomasina tany Ostia. Nafana ny rano :-)
Sary azo jerena vitsivitsy...
Fa ity no sariko tiako indrindra :-)
26 jiona-n'i Roma
2007-07-01 @ 09:26 in Izaho sy ny ahy
Omaly izany no nankalazana ny 26 jiona teto Roma. Tsy maintsy ezahina ho asabotsy alina foana fa raha tsy izany tsy misy handihizana. Efa fantatra ihany fa vahoaka mpi-fety ny Gasy eto Roma ka raha tsy misy fandihizana dia karazan'ny tsy manao fety (hafatra ho an'izay Ambassadeur vaovao ho avy eto io). (tohiny)
«Mialoha 1 2 3 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 32 33 34 Manaraka»